Olona… olana ifotony | NewsMada
Olona… olana ifotony
Par Taratra sur 09/06/2021
Tsy misy ny hoe distrika hadino amin’ny fampandrosoana? Arahaba soa, arahaba tsara. Amin’izao, mandeha ny fanorenana fotodrafitrasa fototra. Tena misy na hisy ny fisitrahan’ny vahoaka ifotony hopitaly manara-penitra, sekoly manara-penitra, kianja manara-penitra… Misy ny efa vita, ao ny an-dalam-panaovana; ny hafa, kasaina hatao.
Ao anatin’izany rehetra izany, misy ny olana fototra mbola mahazo sy mampikaikaika ny vahoaka ifotony amin’ny faritra sasany: tsy fandriampahalemana noho ny asan-dahalo, ady tany amin’ny setrasetran’ny manana sy ny matanjaka… Misy an-taona maro ny fizakana ny mafy sy mangidy ny amin’izany, efa misy ifandovan-taranaka.
Eo koa ny olana efa ho lava amin’ny famatsian-drano miverimberina, ny tsy fampian-tsakafo… Ao ny fahasahiranana amin’ny fifampitondrana eny anivon’ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana. Tsy vitan’izany, misy aza ny efa fizakana fahoriana fa tsy fahasahiranana fotsiny ny amin’ny fitantanana orinasam-panjakana, ohatra.
Ny mahavalalanina amin’izany rehetra izany ka mampanontany tena izay mahalala: tsy maharaka ve ny fitondrana? Na tsy misy ny tatitra miakatra; eny, na efa an-taona maro aza, ohatra, ny fitarainana. Amin’izany, dingan-dava ny antsoantso vonjy: any amin’ny fitondrana foibe avy hatrany. Afa-nenina amin’ny isan’ambaratonga ifotony?
Tena misy tsy fantatra na odian-tsy fantatra amin’ny isan-tsehatra sy isan’ambaratonga? Na misy tsy ahafaha-manoatra, na tratran’ny antsonjay… Vokany: saika tsy fantatra, tsy hita sy tsy re, izay tena olana mahazo ny vahoaka raha tsy misy ny fitsidihana ifotony. Iza no tsy mahalala na tsy mahay na tsy manao ny asany amin’izany?
Misy antony ao… Tsy mampanongon-tena ny tomponandraikitra isan’ambaratonga sy isan-tsehatra ve, ohatra, ny fampiakarana fitarainana sy antso vonjy any amin’ny fitondrana foibe avy hatrany ny sasany? Na olona no olana ifotony… Mbola mety misy ny tsy re na tsy hita amin’izay tena fahasahiranana sy fahoriana mahazo ny mponina? Na hadino…